တရုတ် အရည်အသွေးမြင့် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန် ထုတ်လုပ်သူများ - AMIDI
1. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်း ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်သည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော elastic ဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများရရှိရန် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုကာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ နှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အတွက်နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်သေချာစေရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှု, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဘဝတွေ့ဆုံရန်။ မင်းရဲ့စံပြရွေးချယ်မှုလား။
2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စပရိန်အသုံးပြုမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်တွင် ပစ္စတင်လှံတံသည် တိကျစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၏ အထူးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် မြင့်မားသောမာကျောမှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှုရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စတင်တံနှင့် တိကျသောလမ်းညွှန်ကိရိယာသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောဖျံများနှင့်အတူ နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်၏ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သေချာစေသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင်၊ အလုပ်လုပ်သောလေဖြတ်ခြင်းအရှည်သည် 80-100 ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် အကြိမ်ပေါင်း 1 သန်းထက်မနည်းရှိသည်။ နည်းပညာအသစ်များနှင့် ပစ္စည်းအသစ်များကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အဆင့်အသစ်သို့ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်သည် သေးငယ်သောထုထည်၊ ကြီးမားသော elasticity၊ ကြာရှည်သောအသက်နှင့် အဆက်မပြတ် elasticity တို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။ သေးငယ်သောအရွယ်အစားသည် မှိုနေရာချွေတာနိုင်သည်၊ ကြီးမားသော elasticity သည် စမ်းချောင်းအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ ကြာရှည်သောအသက်တာသည် မှိုထိန်းသိမ်းမှုအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မှို၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော နိုက်ထရိုဂျင်စပရိန်၏ ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်သည် ပေါင်းစပ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံသည်။ အခြားဆလင်ဒါကိုယ်ထည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ဆလင်ဒါကိုယ်ထည်သည် ပိုက်ဂဟေဆက်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကို လက်ခံရရှိသောကြောင့် ထုတ်ကုန်သည် ပိုမိုဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း သေချာစေပါသည်။
3. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်း၏ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
4. နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စမ်းကို ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
1. အပူချိန်မြင့်မားသော၊ စိုထိုင်းဆနှင့် အမျိုးမျိုးသော ဖုန်မှုန့်များရှိသောနေရာများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
2. သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရာတွင် အထူးထုပ်ပိုးထားသော သေတ္တာကို အသုံးပြု၍ တိုက်မိခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပစ္စတင်တံသည် ပွန်းပဲ့သွားပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ထုတ်ကုန်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့နွေဦး၊ ဝယ်မည်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စျေးသက်သာသော၊ စျေးနှုန်းသက်သာသော၊ ကိုးကားချက်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်